मस्तिष्काघात – Health Post Nepal
२०७७ फागुन २१ गते | Friday, 05 Mar, 2021
कांग्रेस नेता जोशी स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै
मस्तिष्काघात भएर नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्थामा सुधार देखिएको छ। उनको उपचारमा संलग्न न्यूरो विशेषाज्ञ डा. राजीव झाका अनुसार स्वास्थ्यमा थोरै सुधार देखिएको हो। उनको शरीरको दायापट्टीको भाग थोरै चलेको उनले बताए। ‘दाया साइडमा हिजो...
‘नेता जोशीको अवस्था अझै चिन्ता जनक’
मस्तिष्काघात भएर नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीको अवस्था अझै गम्भीर छ। उनको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार नआएको उपचारमा संलग्न न्यूरो विशेषाज्ञ डा. राजीव झाले बताए। ‘बिहान हामीले उहाँको स्वास्थ्यवस्था बुझेका थियौं। बाँया साइड पुरै प्यारालाइसिस भइसकेको छ।...
हिँड्दाखाँदैको मान्छे अचानक बेहोस भएर ढल्छ । कतिको होसै फर्किन्न, कतिपयको होस आए पनि पहिलेजस्तो सद्दे हुन सक्दैनन् । समाजमा धेरैले सुनाउने यस्ता कहानीसँगै एउटा डरलाग्दो कारण लुकेको हुन्छ– स्ट्रोक । स्ट्रोकलाई ब्रेन अट्याक वा मतिष्काघात पनि भनिन्छ ।...